(၄) နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ ကလေးငယ်လေးကို မုဒိန်းကျင့်...! - Thadin
HomeNEWS(၄) နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ ကလေးငယ်လေးကို မုဒိန်းကျင့်…!
(၄) နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ ကလေးငယ်လေးကို မုဒိန်းကျင့်…!
March 15, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on (၄) နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ ကလေးငယ်လေးကို မုဒိန်းကျင့်…!
လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်တွင် သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်သူအား နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အချိန်မီဖမ်းဆီး၍ အမှုဖွင့်အရေးယူထား
လှိုင်းဘွဲ (မတ် ၁၄)
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်တွင် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းက အသက် (၄-နှစ်၊ ၄-လ)အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးကို သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခဲ့သူသည့်သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်သူအား နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အချိန်မီဖမ်းဆီး၍ အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိရသည်။
မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁နာရီ ၃၀မိနစ်အချိန်ခန့်က လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ ကမော့ကချူး ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားစုကျေးရွာနေ ဒေါ်မိသိန်း(ခ)ဟာဆွေနာဘီ၏ သမီးဖြစ်သူ မနှင်းအိဖြူ(ခ)ဇိုနိုင်ဒါ(၄-နှစ်၊ ၃-
လ)အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်သည် နေအိမ်ခြေရင်းဘက်တွင်ကလေးငယ်များနှင့်အတူ ဆော့ကစားရာမှ ငိုယိုပြီးပြန်လာသဖြင့် မေးမြန်းကြည့်ရာ တစ်ခြံကျော်တွင် နေထိုင်သည့် ကမာဒင်(၃၂-နှစ်)မှ မနှင်းအိဖြူတို့ဆော့ကစားသည့်နေရာသို့ရောက်ရှိလာပြီး
သမီးငယ်အား ပိန္နဲသီးအနုခူးရန်ခေါ်ဆောင်သွား၍ ရာဘာခြံနှင့်ကျွန်းခြံအစပ် မရမ်းပင်အောက်တွင် သမီးဖြစ်သူ၏ ဘောင်းဘီအားချွတ်ကာ အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသိရှိ
ရသဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်မိသိန်း(ခ)ဟာဆွေနာဘီ(၄၀-နှစ်)မှ အသက်(၄-နှစ်၊ ၃-လအရွယ်)သမီးဖြစ်သူ မနှင်းအိဖြူ(ခ)ဇိုနိုင်ဒါအား အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့သူ ကမာဒင်အား ဥပဒေအရ အရေးယူပေးရန်လှိုင်းဘွဲမြို့မ ရဲစခန်းသို့ လာရောက်တိုင်တန်းခဲ့မှုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် ကမာဒင်အား လှိုင်းဘွဲမြို့မရဲစခန်းက (ပ)၈/၂၀၁၉ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၆ ဖြင့်အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
လှိုငျးဘှဲမွို့နယျတှငျ သကျငယျမုဒိမျးမှုကြူးလှနျသူအား နယျမွခေံရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားက အခြိနျမီဖမျးဆီး၍ အမှုဖှငျ့အရေးယူထား
လှိုငျးဘှဲ (မတျ ၁၄)
ကရငျပွညျနယျ လှိုငျးဘှဲမွို့နယျတှငျ မတျလ ၁၃ ရကျနနေံ့နကျပိုငျးက အသကျ (၄-နှဈ၊ ၄-လ)အရှယျ အမြိုးသမီးငယျတဈဦးကို သားမယားအဖွဈ ပွုကငျြ့ခဲ့သူသညျ့သကျငယျမုဒိမျးမှုကြူးလှနျသူအား နယျမွခေံရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားက အခြိနျမီဖမျးဆီး၍ အမှုဖှငျ့အရေးယူထားကွောငျး သတငျးရရှိရသညျ။
မတျလ ၁၃ ရကျနေ့ နံနကျ ၁၁နာရီ ၃ဝမိနဈအခြိနျခနျ့က လှိုငျးဘှဲမွို့နယျ၊ ကမော့ကခြူး ကြေးရှာအုပျစု၊ ကုလားစုကြေးရှာနေ ဒျေါမိသိနျး(ခ)ဟာဆှနောဘီ၏ သမီးဖွဈသူ မနှငျးအိဖွူ(ခ)ဇိုနိုငျဒါ(၄-နှဈ၊ ၃-
လ)အရှယျ အမြိုးသမီးငယျသညျ နအေိမျခွရေငျးဘကျတှငျကလေးငယျမြားနှငျ့အတူ ဆော့ကစားရာမှ ငိုယိုပွီးပွနျလာသဖွငျ့ မေးမွနျးကွညျ့ရာ တဈခွံကြျောတှငျ နထေိုငျသညျ့ ကမာဒငျ(၃၂-နှဈ)မှ မနှငျးအိဖွူတို့ဆော့ကစားသညျ့နရောသို့ရောကျရှိလာပွီး
သမီးငယျအား ပိန်နဲသီးအနုခူးရနျချေါဆောငျသှား၍ ရာဘာခွံနှငျ့ကြှနျးခွံအစပျ မရမျးပငျအောကျတှငျ သမီးဖွဈသူ၏ ဘောငျးဘီအားခြှတျကာ အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖွဈ ပွုကငျြ့ခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ပွောပွ
သိရှိရသဖွငျ့ မိခငျဖွဈသူ ဒျေါမိသိနျး(ခ)ဟာဆှနောဘီ(၄၀-နှဈ)မှ အသကျ(၄-နှဈ၊ ၃-လအရှယျ)သမီးဖွဈသူ မနှငျးအိဖွူ(ခ)ဇိုနိုငျဒါအား အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖွဈပွုကငျြ့ခဲ့သူ ကမာဒငျအား ဥပဒအေရ အရေးယူပေးရနျလှိုငျးဘှဲမွို့မ ရဲစခနျးသို့ လာရောကျတိုငျတနျးခဲ့မှုဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ကမာဒငျအား လှိုငျးဘှဲမွို့မရဲစခနျးက (ပ)၈/၂၀၁၉ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၇၆ ဖွငျ့အမှုဖှငျ့ အရေးယူထားကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
အတိုင်ပင်ခံ ပဲခူးတိုင်းခရီးစဉ်မှာ ပဲခူးသားတွေလုပ်လိုက်ပုံက ချယ်ရီထက် ချစ်တယ် ဆိုပဲ…!
This Month : 43030
This Year : 238428
Total Users : 597452
Total views : 2747546